Spermidine ntụ ntụ - Onye na -emepụta ụlọ nrụpụta ihe
/ ngwaahịa / Spermidine ntụ ntụ / Spermidine ntụ ntụ
Spermidine ntụ ntụ bụ polyamine ewepụtara na putrescine nke na -etinye aka na ọtụtụ usoro ndu, gụnyere ụkpụrụ nke ike akpụkpọ ahụ, mgbochi nke nitric oxide synthase (NOS) na ntinye nke autophagy. A na -ahụ ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anụ ahụ niile na njikọ ya na acid nucleic. Ọ bụ cationic na ụkpụrụ pH niile ma kwenyere na ọ ga -enyere aka mee ka ụfọdụ akpụkpọ ahụ na akụkụ acid nucleic dị.
Synonyms Ọbara spermidine,
 Nkọwapụta Ihe Nketa Amerịka weghachite 2014-11-18.
 Minois, Nadège (28 Jenụwarị 2014). "Ntọala Molekụla nke mmetụta" mgbochi ịka nká "nke Spermidine na Polyamines ndị ọzọ eke-obere nyocha. Gerontology. 60 (4): 319–326. ma ọ bụ: 10.1159/000356748. PMID 24481223.
 Madeo F, Eisenberg T, Pietrocola F, Kroemer G (2018). "Spermidine na ahụike na ọrịa". Sayensị. 359 (6374): eaan2788. doi: 10.1126/sayensị.aan2788. PMID 29371440.
 Eisenberg T, Knauer H, Schauer A, Büttner S, Ruckenstuhl C, Carmona-Gutierrez D, et al. (Nọvemba 2009). "Ntinye autophagy site na spermidine na -akwalite ogologo ndụ". Nat. Cell Biol. 11 (11): 1305–14. ma ọ bụ: 10.1038/ncb1975. PMID 19801973. S2CID 3126330.
Ọka ọka germ na -ewepụta ntụ ntụSpermidine ntụ ntụ
AASraw bụ onye nrụpụta tụkwasịrị obi yana ikikere iwu kwadoro nke kacha mma Spermidine ntụ ntụ. Nabata ebe ịtụ anyị!